Wholesale PET Chikamu Chikamu Mugadziri uye Mutengesi | Copak
Zvigadziriswazve; Yakagadzirwa ne premium-mhando polyethylene terephthalate (PET)
Ratidza chero chinhu kubva siginecha michero makapu, kuravira makapu kune yakasarudzika shrimp cocktail muto.
COPAK's PET PORTION Kapu Iyo yakajeka uye yakanakisa chivharo chakaringana inowedzera iyo yekukwirisa madudziro kune ese marudzi emenyu zvinopihwa.
Plastiki PET chikamu makapu iwo akakosha ekushandira masukisi, makonduru, kupfeka uye vanoedza kuravira.
Yakagadzirwa kubva sekristaro yakajeka, yakaoma PET iyo yakasimba uye inoratidza zvigadzirwa zvako kune kwavo kwese.
Vamwe PET chikamu chemukombe pamwe inopisa kupisa hukuru:
PET PORTION (SAUCE) KOMI DZAKATEVEDZANA
Sarudzo Yakakwana Yekutora-Kuburitsa, Dhirivhari uye Kudya Kwezvakakosha
Simply Kununura inodada nekupa iyo yekudyara-sevhisi indasitiri nezvigadzirwa zveprimiyamu pane kukosha kukuru.
Kunze kwekuchengeteka, kusimba, uye kuvimbika, COPAK dzakasiyana siyana zvigadzirwa zvinogadzirika, zvinogadziriswazve, uye zvinoshandiswazve pese pazvinogoneka uye zvichikwanisika.Kuwedzera indasitiri yekushandira chikafu kune imwe nhanho yemhando, Paunenge uchitsvaga chiratidzo chaunogona kuvimba, sarudza Shanghai COPAK.
Nepo masukisi, madhiri, uye mativi achizadza zvinonaka dinning chiitiko, COPAK PET mugove wemikombe uye muvharo pedzisa izvo zvinodikanwa zvekuratidzwa kwebasa rekudya. YeduPET mugove wemikombe akareruka uremu muchimiro chemidziyo, inogara yakasimba, inopwanya-chiratidzo, oiri nemvura inodzivirira uye eco hushamwari.
Nemhando dzakasiyana dzemakondohwe nemativi, idya mukati kana kutora,PET mugove wemikombe kukupa rusununguko rwekushandira zvirinyore mativi akapatsanurwa akaganhurwa kana zvinwiwa.
Isu tine yakakosha mhando yekudzora timu, mbishi kusarudza dhipatimendi uye mhando yekutarisa vanhu. Uye izvi zvichaita zvishoma kunyunyuta kubva kune vako vatengi.
Hot tag: PET PORT CUPS, eco hushamwari, yakajeka mukombe, tora yedu PET mukombe
Pashure: Plastiki saladhi mudziyo
Zvadaro: PET Sauce Mukombe
China PET mukombe mutengesi
Disposable epurasitiki mikombe pamwe Logo